Archive du 20190925
Fitondrana IRD Efa manjaka tokana fa tsy mbola mahavita ihany
Midangana ny vidim-piainana, saingy tsy manana vahaolana tena mafonja ny fanjakana.
Fampandrosoana eny ifotony Afaka mahaleotena amin`ny alalan`ny hetra
Araka ny and. 149 ao anatin`ny lalàmpanorenana, “ny kaominina dia mandray anjara amin`ny fampandrosoana ara-toekarena, ara-tsosialy, ara-kolontsaina sy momba ny tontolo iainana eo amin’ ny fari-pifidianam-paritra misy azy.
Niteny ny CFM Ben’ny tanàna mendrika ho ray amandreny no ilaina
Manao antso hatrany ny komitin’ny fampihavanana Malagasy na CFM fa fifidianana ifotony tena ahitana taratra ny hoe fanjakana akaikin’ny vahoaka ny fifidianana ben’ny tanàna.
Bokan-trosa 1600 miliara Ar ny Jirama Hakarina tsikelikely ny vidin-jiro…
Vita ny fanadihadiana lalina nataon’ny Cabinet Castalia Limited hoenti-mamantatra ny tena olan’ny orinasam-panjakana Jirama hahafaha-manarina azy io.
Vilany vita gasy Voarara ao La Réunion fa mankarary
Tombanana ho olona 400 isan’andro, maneran-tany no mamoy ny ainy vokatry ny aretina antsoina hoe :
Pimaso ho an’Antananarivo Tonga ny kamio hanala « fako politika »…
Hita nampiasaina tamin’ny Tagnamaro andiany faha-7 ny sabotsy teo ny « camions multibennes » lehibe, nampiasaina nitaona fako nandritra io hetsika io ny 21 septambra.
Fivoriamben’ny ONU any New York Tsy sahy nankany ny filoha Rajoelina ?
Tanterahina any New York any Etazonia nanomboka omaly 24 septambra ny fivorianambe faha-74 ho an’ny Firenena Mikambana na ny ONU.
Rugby à XV “GOLD TOP20-2019” Fantatra ireo ekipa iray vondrona
Tontosa omaly talata 24 septambra 2019 nanoloana ny solontenan’ireo mpandray anjara sy ny mpanao gazety,
Hita taratra ny tsy firindran’ny fitantanana ny firenena sy ny fikorontanana ao anaty fanjakana ao.Tsy voahaja ny fisaraham-pahefana, hany ka mifanenjana ny minisitry ny fitsarana sy ny Talen’ny rantsana mpandray fitarainana eo anivon’ny Fiadidian’ny Repoblika.
Famokarana angovo Mbola lavitra ny lalana
Tontosa omaly tetsy Ampandrianomby ny fifanaovan-tsonia fifanaraham-piara-miasa teo amin’ny orinasa avy any Afrika Atsimo mamokatra angovo sy ny minisiteran’ny angovo, ny rano ary ny Akoranafo.
Fanodinana tobim-pamokarana Mbola taraiky i Madagasikara
Ny 73%-n’ireo tobim-pamokarana herinaratra eto Madagasikara dia mihodina amin'ny alalan'ny solika avokoa. Ny 27% ihany no mbola azo avy amin'ny angovo azo havaozina.
7 volana tsy nandray karama Raikitra ny fitokonan’ny mpiasan’ny FOFIFA
Mpiasa hatrany amin’ny 200 eo anivon’ny FOFIFA na ny FOibem-pikarohana momba ny FIkarohana ampiharina amin’ny FAmbolena no nanao fitokonana teny amin’ny anoloan’ny Birao misy io sampan-draharaha io eny Ampandrianomby omaly talata 24 septambra.
Assanati Famo Gidraka “Hanasoa ny mpiarabelona tsy misy tambiny”
Tsy mitsahatra ny fikambanana Assanati Famo Gidraka amin`ny fanampiana ny mpiarabelona. Hanasoa tsy misy tambiny no tena antom-pijoroany, indrindra fa ny vehivavy sy ireo tena sahirana.
Faritra Atsinanana Hambolena zanakazo 10 tapitrisa fototra
Naompana tamin’ny lafiny tontolo iainana ny andiany fahadimy amin’ny hetsika Tagnamaro nandraisan’ireo sehatra maro samy hafa anjara tamin’ny alalan’ny fanomanana zanakazo ka miisa 70.000 fototra no vita tamin’izany.